Star Wars Tag: 5 yakanaka Star Wars bhodhi mitambo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | May 4, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau, top list
Pakupedzisira Star Wars Day zvakare: iro risiri pamutemo zuva rekuita raGeorge Lucas' sci-fantasy epic rakapembererwa kwenguva yakareba, kubvira 2011 kunyangwe nehurongwa hunoperekedza. Zvisinei, mashoko ekutanga okuti "Ngaave Newechina" akareba. Saka chii chekuita paStar Wars Day? Tamba mitambo yebhodhi, semuenzaniso - pamazita epamusoro akavakirwa pane franchise. Isu tinopa 5 yakanaka Star Wars bhodhi mitambo pazasi.
Star Wars chiitiko chisina kurasikirwa nekukwezva kwacho kubva payakatanga muna 1977 neA New Hope - yaingonzi Star Wars. Hongu, vatevedzeri vechikoro chekare vanotsoropodza trilogies yemazuva ano, asi mafirimu pamusoro pechizvarwa chitsva chegamba zvakadaro akakwezva mamiriyoni evanhu kumafirimu. Uye muridzi wemhando Disney haaneti kutora franchise kuti arambe achitaura nyaya nyowani, akati wandei emafomati matsva ave akanaka chaizvo. Icho chokwadi chekuti Star Wars yave nenguva yakawana nzira kubva pachiratidziro kuenda kuimba yekutamba yepamba haisi diki nekuda kweasingaverengeke rondedzero mikana iyo iyo franchise inopa kune chikamu chemitambo. Kune mitambo yemavhidhiyo, uye hongu mitambo yebhodhi zvakare. Iwe uchawana mishanu yakanaka Star Wars board mitambo pazasi - zviri pachena kwete mune chero kurongeka kwenzvimbo.
Star Wars: Legion idiki mutambo wehondo dzehungwaru. Mufananidzo: Muparidzi
Star Wars: Legion ndeimwe yemitambo midiki yebhodhi pakati peStar Wars mazita. Kusiyana neStar Wars: Imperial Assault, zvisinei, Legion ichiri kuwedzera nezvinhu zvitsva. Se fan, unotenga pano nemitengo yakajairwa - yeStar Wars: Imperial Assault iwe unofanirwa kuchera zvakadzika muchikwama chako. Zvakadaro: Iyo dhizaini madiki mutambo Legion zvakare iguva re penny. Kune asingaverengeki emauto ekusimudzira uye vatungamiriri - vese vanopeta mafaro. Kutanga iwe unofanirwa kuunganidza iwo manhamba uye zvine hungwaru kunyange kupenda iwo.
Hondo yega yega inozopedzisira yabva panhamba yakatarwa yemapoinzi. Parizvino pane zvikwata zvina zvekusarudza kubva mumutambo wevatambi vaviri: Empire, Rebel Alliance, Galactic Republic uye Vaparadzanisi. Kune zvakare nhamba huru yevatambi uye mauto ehondo kubva mumafirimu uye akateedzana, ayo anozopihwa kune rimwe remapato. Maitiro acho ari nyore, asi kwete asina matambudziko: Vatambi vaviri vanosangana munhandare yehondo - unogona zvakare kuvaka izvi, nenzira, kana uchida - uye unzwe kuvaraidza skirmish zvinotora maawa maviri. Star Wars: Legion haidi nyaya, nekuti mutambo webhodhi uyu uri pamusoro pekuratidzira kwehunyanzvi.
Pfungwa iyi yakafanana neStar Wars_Armada kana Star Wars: X-Wing, ese ari mimwe mitambo midiki umo vatambi vanogadzira yavo bandi rehondo kuti varwe mumwe nemumwe - panguva ino muchadenga. Star Wars: Legion haisati yasvika kumagumo ehupenyu hwayo, saka zvichiri kugona kutanga pasina matambudziko. Atomic Mass Studios nguva pfupi yadarika yakatora basa rekugadzira uye yakaratidza zvimwe zvenguva yemberi.
Star Wars: Legion inokurudzirwa vanhu 2 vane makore gumi nemana zvichikwira uye ine nguva yekutamba yemaminetsi zana nemakumi maviri.
Asmodee | Atomic Mass Games | Star Wars: Legion | Basic game |... * Parizvino hapana ongororo 69,95 EUR tenga
Asmodee | Atomic Mass Games | Star Wars: Legion - Clone Wars |... * 84,99 EUR tenga
Nyeredzi Hondo: Kumukira
Star Wars: Kumukira kunoonekwa seimwe yeakanakisa zano bhodhi mitambo yevatambi vaviri. Mufananidzo: Muparidzi
Star Wars: Kumukira inyanzvi yehunyanzvi mutambo unopinza vatambi vaviri vachipesana mumabasa eHumambo uye Rebel Alliance. Iyo ipfungwa yakachena duel, asi ine asymmetrical mutambo pfungwa yakavakirwa panhau yemafirimu. Zviri kune vapanduki kuti vaparadze Nyeredzi Yorufu, zviri nani kushandisa mazano ehugandanga; Humambo, kune rumwe rutivi, hunofanira kuwana nekuparadza hwaro hwevapanduki.
Mutambo unobata uye une hunyanzvi hwekuda katsi-nembeva une mavara anozivikanwa kubva kuStar Wars universe unoitika mukati menguva inosvika maawa matatu. Akasiyana-siyana mavara makuru anoshanda seakakosha mayuniti evatambi, mumwe nemumwe aine hunyanzvi hwakasiyana. Iyo inodiwa nguva yekuzvipira ndiyo zvakare kukanganisa kukuru kwebhodhi mutambo. Asi: miniti yega yega yakakosha. Kashoma mitambo yebhodhi inogara ichinakidza kubva pakutanga kusvika kumagumo, Star Wars: Kumukira ndeimwe yeanogamuchirwa anosarudzika uye zvakare inokwezva mutengo wezvainopa.
Mutambo wega wega wakasiyana, zvirinani zvakadzama, uye nokudaro unonyora nyaya yayo. Izvo ndezvekukakavadzana kwakavhurika, kurwiswa kwehugandanga, kuparadza, kubiwa uye hunyanzvi hwekuita diversionary maneuvers. Uwandu hwemazano anobvira hwakakura. Star Wars: Chimurenga haungori chero Star Wars bhodhi mutambo, ndeimwe yeakanakisa, pamwe akanakisa. Nekudaro, zita racho rinoda imwe nguva yekudzidziswa. Mitambo mizhinji inopfuura usati waziva uye unogona kushandisa ese akakodzera matipi. Izvo zvakanaka, nekuti kusvika parizvino chete kuwedzera "Rise of the Empire" hakungowedzere kurudziro yenguva refu: iyo yekuwedzera inoitawo kuti mutambo webhodhi uve nani nekuti unobvisa kusasimba mumutambo wekutanga. Iyo kurudziro saka yakajeka: iwe unofanirwa kutamba Chimurenga pamwe chete nekuwedzera.
Star Wars: Chimurenga chinokurudzirwa kune 2 (4) vanhu vane makore gumi nemaviri uye kupfuura uye ine nguva yekutamba inotenderera 12 maminetsi.
Asmodee | Fantasy Flight Games | Star Wars: Kumukira |... * 64,99 EUR tenga
Star Wars: Talisman naPegasus Mitambo ndeye yakavakwazve RPG classic. Mufananidzo: Muparidzi
Yakanga iri nguva refu yapfuura, mugirazi kure, kure: zvakanaka nezvakaipa zvakarwa, uye panguva ino muStar Wars: Talisman, vatambi vari mukati mehobvu yacho. Mukupesana nemimwe mizhinji yemitambo yebhodhi yeStar Wars, mutambo webhodhi hauna kudzika zvakanyanya, uine tarisiro yekunakidzwa kusingaomesere kunoenderana nemutambo-wekutamba wekare Talisman. Saizvozvo, kune zvakanyanya kungoita shanduko yekuona, asi zvakare inotamba yekuwedzera budiriro. Mirayiridzo yacho yakanyanya kuoma munzvimbo, saka unogona kuunza zita racho kumusoro kanopfuura kamwe kuti unzwisise zvizere mitemo. Hapana chaicho chinodzosera kumashure, nekuti mutambo weStar Wars: Talisman wakakodzera.
Papakati payo, chinotariswa chiri pakupatsanurwa pakati peJedi naSith - muStar Wars: Talisman izvi zvine chekuita nemutambo. Kune rimwe divi, izvi zvinokanganisa zvinobvira kurwiswa zvibodzwa uye, kune rimwe divi, kudziviswa muunyanzvi hwesimba rinoitwa. Chikonzero chikuru chinoita kuti vateveri vafare ndechekuti ivo vanoziva template: Mukutengesa kwemitambo, iwe uchasangana nevanozivikanwa mavara nenzvimbo dzisina kungobva pane zvekare, asiwo nekududzira kwaDisney kweStar Wars - saka inyaya yekuravira. .
Zvinofadza: Mukati memutambo, mavara evatambi anokura, anogashira hunyanzvi hutsva nemidziyo. Sei zvese izvi? Pakupedzisira, ndezvekukunda Emperor pachake muhondo inonyengera yekupedzisira kuitira kuti ave mutongi weboka renyeredzi. Star Wars: Talisman ine yakasviba-yakasviba mativi chiyero twist yakasarudzika muStar Wars board game space. Mari yekutora iri pakati nepakati.
Star Wars: Talisman mutambo wekutamba uye unokurudzirwa kune 2 kusvika ku6 vanhu vane makore gumi nemaviri zvichikwira. Mutambo unotora anenge 12 kusvika 90 maminetsi.
Pegasus Mitambo 56110G - Talisman: Star Wars Edition * 39,99 EUR tenga
Star Wars: Vhura
Star Wars: Vhura mapuzzle akaiswa mugirazi. Mufananidzo: Muparidzi
Star Wars: Kiinura yakakosha pakati pemitambo yebhodhi yeStar Wars mune akati wandei: Iwo mutambo wakasarudzika uye hausi wehondo dzakavhurika kana skirmishes ehungwaru, asi nezvekugadzirisa mapuzzle. Iko kune yemahara shamwari app yeIOS uye Android. Mutambo wemakadhi ndewekuongorora nharaunda kuti uwane zvinongedzo, kubatanidza zvinhu nemazvo uye kugadzirisa mapuzzle kumagumo - izvi zvinotosiyanisa zvakajeka Star Wars: Vhura kubva kune yakamboburitswa Star Wars board mitambo.
Zvitatu zvinosanganisirwa zvinoita kuti vatambi vafambe vachiyambuka girazi. Inoenda kuOuter Rim, kuHoth uye kune yakavanzika mishoni kuna Jedha. Pano, zvakare, haingori iyo yekare trilogy inogadziriswa nemusoro. Kutamba kunotora anenge maminetsi makumi matanhatu, asi mamwe mapoka evatambi anogona kuzviita munguva shoma. Star Wars: Kiinura haina kungonangana nevateveri veGeorge Lucas 'epic, zvakare ndiyo yakanaka sumo yeAsmodee Unlock series.
Hunhu hwemapuzzle hunosiyana zvakanyanya zvichienderana nerwendo. Zita racho rinogona kuratidza kuti rakanyanya kureruka kune vatambi vane ruzivo, asi izvozvo hazvina basa nekuti vazhinji veterans vateresi zvakadaro. Star Wars: Kiinura inouya muchiedza chemaitiro arikuenderera mberi mukutiza bhodhi mitambo, asi haisanganisi kuparadza chero chinhu. Iwe unogona ne theory kutamba kakawanda, kunyangwe kana kukurudzira kuchingodzikira mushure mekunge basa rapera. Star Wars: Kiinura saka yakakwana semutambo wekupfuura.
Star Wars: Vhura yakaburitswa neAsmodee Germany. Inokurudzirwa kune 1 kusvika ku6 vanhu vane makore gumi uye kupfuura uye inotora maminitsi makumi matanhatu.
Asmodee - Vhura! The Escape Game: Star Wars, Escape Room ye... * 40,53 EUR tenga
Kiinura! Star Wars - Set: Chakavanzika Mission paJedha puzzle mutambo,... * 20,99 EUR tenga
Nyeredzi Hondo: Rokunze Rim
Star Wars: Outer Rim ine nyaya dzakawanda uye akawanda mavara - uye pachave nekuwedzera nekuwedzera. Mufananidzo: Muparidzi
Star Wars: Outer Rim ndiwo mutambo webhodhi weStar Wars uyo vateveri vaive netarisiro huru payakaburitswa. Pakupedzisira kunyora nyaya ine hunhu uye nekusangana nechiitiko chirikuitika. Iwe unotsvedza kuita chinzvimbo cheanozivikanwa hunhu kubva kune sci-fungidziro yakasikwa - akadai saHan Solo, Boba Fett kana Lando Calrissian - uye wobva wasimuka nechitundumuseremusere chako kuti uwane mukurumbira. Mumakinika mazwi: unganidza mukurumbira mapoinzi.
Nzira ndiyo chinangwa. Iwe unopedza mabasa, sangana nevavengi, unganidza mabhonasi, shongedza hunhu hwako, ngarava yako uye vashandi vako uye ruzivo nhanho nhanho diki nyaya dzinobva pazviratidziro kubva mufirimu trilogy. Mutambo webhodhi wakakosha pakuona kwekutanga: pachinzvimbo chebhodhi remutambo wekare, vatambi vanofamba pane imwe semicircular ring, iyo eponymous Outer Rim. Mitemo inogona kudzidzwa nekuenzanisa nekukurumidza, mafambiro anoitika muhurongwa hwakagadziriswa nezviito zvakasiyana.
Kune zvakare chinhu chinocherechedzwa cherombo, asi ndihwo hupenyu hwevatengesi nevashambadziri vezvinonhuwira. Kubudirira kwekutanga kwemutambo kunotsamira pazvinhu zvishoma zvisina tsarukano. Kana makadhi nemadhayisi zvisingareve zvakanaka kune mumwe wevatambi, kutanga kunogona kuoma - asi izvi zvinokwana mutambo uchienderera mberi.
Pakati payo pane giya remutambi uye kuona nyaya dzinoburitswa kuburikidza nezviitiko zvemepu.. Star Wars: Outer Rim saka mumwe weiyo Star Wars board game inonyanyonangana nevateveri vemafirimu kana franchise. Chinonyanya kunakidza ndechekuonazve zviitiko zvinonyatsozivikanwa kubva patemplate patafura yemutambo webhodhi - dzimwe nguva nemhedzisiro isina chokwadi. Star Wars: Outer Rim inopa yakawanda flair uye mhepo, asi panguva imwe chete inofanirwa kunetseka neimwe kana imwe kukanganisa. Asi: Nekuonekwa kwekutanga kwekuwedzera "Vhura invoice" pane mukana wekugadzirisa zvine musoro. Uye sezviri pachena iyo yekuwedzera inobvisa zvimwe zvikanganiso, inopa kwakawanda kunetsana uye dzimwe nyaya diki mune kadhi fomu. Zvinenge zvichienda pasina kutaura kuti mavara matsva uye spaceships zvinouyawo kutamba.
Star Wars: Outer Rim inyanzvi yemutambo wevatambi 1 kusvika 4 uye yakakurudzirwa kwemakore gumi nemashanu+. Mutambo unotora anenge 15 kusvika 120 maminetsi
Asmodee | Fantasy Flight Games | Star Wars: Outer Rim |... * 59,49 EUR tenga
Asmodee | Fantasy Flight Games | Star Wars Outer Rim - Vhura... * tenga
Kare Blade Runner: Peni nePepa ine hasha yekuunganidza mari kutanga
Inotevera Sniper Elite 5: Multiplayer uye kupinda mune itsva trailer
Patch inounza zvitsva zvemakororo nemagamba
Kickstarter Report: Chivabvu 2016
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Nhamba dzekutengesa dzinonyatsopfuura Wii vhezheni
WWE 2K22: Yangu Faction Team Kuvaka